lundi, 04 mars 2019 16:45
MD Antanimora i Jean Nirina Rafanomezantsoa Hafari Malagasy.
lundi, 04 mars 2019 14:42
Vontovorona: Sazy miantona 15 andro izy efatra mirahalahy
Nivoaka ny didim-pitsarana ho an'ireo mpianatra voasambotra teny Vontovorona, taorian'ny fitsarana azy ireo androany tolak'andro.
Sazy miantona 15 andro isanisany no nomen'ny fitsarana ambaratonga voalohany azy efatra mirahalahy. Izany hoe mandritra ny 5 taona raha misy heloka hafa, na mamerin-keloka dia mihatra avy hatrany io sazy am-ponja 15 andro io.
lundi, 04 mars 2019 14:23
Sambava: Nikatona ny vavahadin’ny hopitaly SALFA, nitokona ny mpiasa
Akory ny hatairana raha nahita fa nitokona ny mpiasan'ny fahasalam-bahoaka ao amin'ity hopitaly tsy miankina ity.
Raha ny hita tamin'ny 10 ora maraina dia mbola tao anatin'ny dinika mihidy aman-trano ny mpiasa sy ireo tompon'andraikitra, izay hijerena ny vahaolana mety ho azo aroso amin'ity zavatra tsy eken’ny mpiasan’ny SALFA ity.
Andrasana izay mety ho marimaritra iraisana amin'ny fihaonana mba hiravonan’izao fitokonana izao fa lasa misy fiantraikany amin'ireo marary tonga eny mitaky ny zony hotsaboina.
Harahintsika aikaiky ny tohiny...
lundi, 04 mars 2019 14:19
Fanafihana RN7: Lasan'ny jiolahy ny vola sy findain'ny mpandeha tao anaty Sprinter
Fiara Sprinter avy any Toliara hiakatra any Antananarivo no voatafika tamin'ny lalam-pirenena faha-7 ny sabotsy 2 martsa teo, tokony ho tamin'ny 2 ora sy fahefany maraina.
Jiolay niisa 8 no nanakana tamin'ny hazo kesika notapahina teo antsisin-dalana nampijanonana ny fiara, 2 km eo ho eo tsy hiditra an'Andranomanelatra-Antsirabe. Novakian'izy ireo ny fitaratry ny fiara.
Ny vola sy ny finday tany amin'ireo mpandeha no nalain'ireo mpanakan-dalana. Tsy nisy naratra aloha ny mpandeha.
Efa manao fikarohana ireo jiolahy ny Zandary.
Heverina fa olona tsy lavitra ny Fokontany Bemololo Andranomanelatra no nahavanon-doza.
lundi, 04 mars 2019 14:12
Antananarivo: Nanjary andavanandrom-piainan’ny mponina ny delestazy
Tsy misy lera intsony fa na andro na alina, tapaka ny jiro.
Namoaka fanambarana ny teo anivon’ny Jirama tamin’ny 18 febroary 2019 fa ho famahana ny olan’ny fahatapahan’ny herinaratra noho ny delestazy dia nandray fepetra niaraka ny Ministeran’ny Angovo, ny rano, ary ny akoranafo sy ny mpitantana ny orinasa Jirama, nanomboka ny sabotsy 16 febroary teo, fa hampitomboina avo roa heny ny solika ampiasaina amin’ireo foibem-pamokarana herinaratra mampiasa solika eto amin’ny tambazotra iraisan’Antananarivo (RIA), mba hanonerana ny tsy fahampian’ny famokarana herinaratra vokatry ny tsy fahampian-drano amin’ireo foibe mpamokatra herinaratra ao Andekaleka, Mandraka, Antelomita, Sahanivotry, Tsiazompaniry ary Manandona, saingy ny teo ihany no teo, ary nisesy aza ny fahatapahan-jiro tato ho ato.
lundi, 04 mars 2019 14:09
Port-Bergé: Dahalo telo maty voatifitry ny Zandary
Avy nangalatra omby miisa dimy tany Mampikony II ireto dahalo ireto tamin’ny zoma 1 martsa, no niazo an’i Port-Bergé ny lalany.
Nanao fanarahan-dia ny tompon’omby ka tany Port-Bergé no hita ireto dahalo ireto. Nampandre ny Zandary ny mpanaradia. Niditra an-tsehatra ny Zandary, nisy ny fifandonana ka nahafaty ireto dahalo ireto omaly. Tafaverina tamin’ny tompony ny omby dimy.
lundi, 04 mars 2019 14:04
Oniversite: Mifidy izay ho filoha sy Sojabe
Manomboka anio ny fifidianana ny filoha sy ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny hitantana eny amin’ny oniversitem-panjakana. Ho an’ny oniversiten’Antsiranana izao dia misy roa ny kandida ho filoha, dia Pr Abdoul Fatah, izay Sojaben’ny fakioltean’ny siansa, sy Pr Ratsaramody Justin, ilay lefitry ny filohan’ny oniversite hodimbiasan-toerana, Pr Manorohanta Cécile. Roa ihany koa ny kandida filoha ho an’ny oniversiten’i Fianarantsoa ka anisany ny filoha amperinasa Pr Rafamantanantsoa Fontaine.
Amin’ny 11 martsa kosa no hotanterahina ny fifidianana ho an’ny oniversiten’Antananarivo. Telo ny kandida dia Pr Richard Ranarivony (Faculté des Lettres et Sciences Humaines), Pr Luc Hervé Samison (Faculté de Médecine) ary Pr Mamy Ravelomanana (Faculté d’Économie, de Gestion et de Sociologie).
Vontovorona: Hotsaraina anio ireo mpianatry ny Polyteknika nosamborina noho ny grevy
Efa-dahy izy ireo dia i Randriamampiavana Donald, filohan’ny fikambanan’ny mpianatra Polyteknika, izay notazomina am-ponja vojimaika eny Antanimora tamin’ny faran’ny herinandro teo, sy telo lahy hafa nomena fahafahana vonjimaika rehefa avy notanana natao andrimaso teny amin’ny Zandary taorian’ny nisamborana azy ireo nandritra fitakiana natao anaty fitokonana nataon’ny mpianatra ny fiandohan’ny herinandro lasa teny Vontovorona.
Anio tolakandro ny raharaham-pitsarana azy ireo.
lundi, 04 mars 2019 08:01
Ivato-Ambositra: Vato kristaly 28 taonina tsy nisy taratasy ara-dalàna
Avy any Ambatofinandrahana ary ho entina ao Antananarivo ireto vato ireto, nentina tamina kamiao roa, no sarona tamin’ny fisavana nataon’ny Zandary teo Ivato Centre rehefa nahazo fampilazana mialoha ireto farany.
Tsy nisy taratasy ara-dalàna ny nitondrana ireto vato ireto, mety saika hanararaotra ny fampihatonana ny fisavana taratasin’ny fiara ataon’ny Police de la Route.
Tazomina ao Ambositra miandry ny « Police des mines » hanao ny fanadihadiana ireo vato.
Olona iray koa no notazomina raha saika hanao kolikoly tamin’ny Zandary hamotsorana ireo vato ireo.
lundi, 04 mars 2019 07:43
Fifidianana depiote: Mbola folo eo ireo kandida nametraka dosie nanerana ny Nosy
Miditra amin’ny herinandro faharoa ny fametrahana antontan-taratasy firotsahan-kofidiana solombavambahoaka. Tamin’iny faran’ny herinandro iny dia zara raha nisy folo ireo kandida nametraka dosie teny anivon’ny OVEC nanerana ny Nosy.
Ny 12 martsa 2019 amin’ny 5 ora hariva vao hikatona ny fandraisana dosien’ireo kandida, rehefa nisokatra ny 26 febroary 2019 tamin’ny 9 ora maraina.